Uyibona njani bukhoma inkcazo ye-OnePlus 7 eLondon | I-Androidsis
Uyilandela njani inkcazo ye-OnePlus 7
Njengoko kuqinisekisiwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, i-OnePlus 7 Banikezelwa ngokusemthethweni namhlanje, nge-14 kaMeyi. Uphawu lwesiTshayina lubonisa isiphelo salo esitsha, ngeli xesha liza neefowuni ezimbini, imodeli eqhelekileyo kunye nePro version, ekungumba ophambili wokuvuza kwezi veki, njengesikrini sakho. Umzuzu obalulekileyo wenkampani, oya kuthi namhlanje utyhile yonke into.
Banokubaninzi abasebenzisi abanomdla ukulandela umboniso wale OnePlus 7. Ngaba kunokwenzeka ukwenza oku? Kukho iindaba ezimnandi, kuba umsitho wokubonisa uza kusasazwa ngqo kwiYouTube, njengoko inkampani ngokwayo sele iqinisekisile. Iya kuba lula ukuyilandela.
Ngeli xesha, inkampani iququzelele imicimbi emithathu ngaxeshanye. Enye eNew York, enye eLondon enye eBangalore (eIndiya). Ke sinokuyilandela le micimbi ngamaxesha onke kwaye sizazi zonke iindaba zokuba olu luhlu lwe-OnePlus 7 luzakusishiya kulo nyaka. Ikhonkco lokulandela lilapha ngezantsi:
Umsitho eLondon uqala nge-17: 00 ngexesha leSpanish. Ukusukela ngeli xesha, kule khonkco unayo apha, kuya kubakho ukulandela umsitho kwikomkhulu laseBritane. Kulula kakhulu ukuba ungaphoswa naziphi na iindaba malunga nento abaza kusishiya ngayo. Ewe siya kuwulandela lo msitho kwaye siza kukuxelela zonke iindaba ngezi fowuni.
Kuyenzeka ukuba uye emntwini uye ezi ziganeko zonikezelo ze-OnePlus 7. Nangona amatikiti athengiswa okwexeshana, ibango belilikhulu kakhulu. Kuyacaca ke ukuba kunomdla omkhulu kwinxalenye yabasebenzisi ukuba bakwazi ukuya kulo msitho ukubonisa izixhobo.
Malunga neeyure ezisi-7 lo msitho uza kuqala eLondon. Emva koko sinokubona ukuba yintoni uphawu lwesiTshayina oluye lwayilungisa kolu luhlu lwe-OnePlus 7. Uluhlu lweefowuni ezinazo Ndijonge ukuphinda impumelelo yonyaka ophelileyo, ebancedileyo ukuba babe yenye yezona zinto zithengiswa kakhulu kwisiphelo esiphakamileyo kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Uyilandela njani inkcazo ye-OnePlus 7
I-Alcatel 1C, 1S, 3 kunye ne-3L isungulwe ngokusesikweni eSpain
Ungazifihla njani iiapps kwiXiaomi